Fikarohana momba ny firaisana Chanel Reincarnation Film sy ny raharaha momba ny fiainana taloha tany Ellen Louise Demorest | Coco Chanel - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Ny orinasa Chanel dia namoaka horonantsary fohy mitondra ny lohateny Reincarnation Ao anatin'izao fiainan'olo-tsotra izao dia manana endri-javatra mitovy amin'ny endriky ny mpiara-belona aminy. Ny fitoviana amin'ny endriky ny endriny dia tena tohanana amin'ny tranga tsy miankina amin'ny fikambanan'ny zaza vao teraka, anisan'izany ireo izay navoakan'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia.
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, Nanontany momba ny fiainan'ireo olona nasongadina tao amin'ny sarimihetsika Chanel aho. Ankoatra izany, nanontaniako ny fiainany taloha teo amin'ny mpanorina ny trano fanao Chanel, Coco Chanel.
Ahtun Re, ilay torolalan'ny fanahy notarihin'i Kevin izay nampiseho ny fahafaha-manao ny fiainana lasa amin'ny hasarobidy be dia be, nilaza tamiko fa teo amin'ny fiainana taloha, Coco Chanel nipetraka tany New York ary niaraka tamin'ny vadiny, izay manana razambe frantsay, dia namorona orinasa mpanamboatra akanjo izay nitondra ny lamaody any Paris ho an'ny vehivavy amerikana. Rehefa nanontany aho hoe iza ny anaran'ireto mpivady ireto dia nilaza i Ahtun Re fa noheveriny ho "Demoreax" ilay anarana.
Tena akaiky i Ahtun Re. Tamin'ny fanadihadiana kely, hitako fa nisy mpivady iray antsoina hoe Demorest dia namorona orinasa fitafiana tao New York City. Ellen Louise Demorest dia nanamboatra fomba iray hamoronana endriky ny akanjo vita amin'ny totozy amin'ny endrika maro, izay namela ireo vehivavy nanam-pahefana maotina hitady akanjo izay mamolavola mody avy any Parisy. Taloha tamin'izany, Ramose Demorest dia mpanao hatsikana. Miaraka amin'ny vadiny, William Jennings Demorest, nanangana trano lamaody tena nahomby ireo mpivady.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovitovy amin'ny endriky ny endriky ny Ellen Louise Demorest sy Coco Chanel, indrindra eo amin'ny maso sy ny maso-mena. Ny fitoviana eo amin'ny maso sy ny taovam-pananahana amin'ny toe-javatra iainana taloha dia matetika mahavariana indrindra, satria ity ampahany amin'ny tarehiny ity dia kely voakasika amin'ny lanjany amin'ny lanjany sy ny tavy na tarehy amin'ny tarehy.
Ny fiainana taloha talenta: Ellen Louis Demorest dia nanao akanjo Parisiana ary azo vidiana ho an'ny vehivavy amerikana. Coco Chanel dia nanampy ireo vehivavy malalan'ny taonjato 19 sy avy amin'ny kofehy ary nanamboatra akanjo fitafy ho an'ny vehivavy. Ellen Demorest sy ny vadiny dia namorona iray amin'ireo trano fanao mahazatra indrindra tamin'ny andron'izy ireo, tahaka ny nataon'i Coco Chanel tamin'ny androny.
Fiovam-pirenena: Teraka tany New York i Ellen Demorest, raha frantsay kosa i Coco Chanel.